PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - ZIZODUMA EDILINI LOMCULO WOKUKHUMBULA U-BRA HUGH
ZIZODUMA EDILINI LOMCULO WOKUKHUMBULA U-BRA HUGH
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO
KULINDELEKE ukuba namuhla kutheleke izinkumbi edilini lomculo lokukhumbula nokuvalelisa ingwazi ye-jazz uhugh “Bra Hugh” Masekela, odlule emhlabeni ekuqaleni kwaleli sonto.
Leli dili lizoqala emini ngehora le-12 e-university of Johannesburg, egatsheni elisesoweto, eningizimu yegoli.
Ngolwesihlanu kube nenkonzo yesikhumbuzo kabra Hugh, ebisesan Kopano Community Centre, e-alexandra, eningizimu yegoli.
Le nkonzo beyethanyelwe yinqwaba yamaciko adumile nezikhulu kuhulumeni.
Phakathi kwamanye amaciko abehambele le nkonzo kubalwa udorothy Masuka naye ongumculi we-jazz, ngujonas Gwangwa oyingwazi yawo lo mculo, ngusonkondlo ophinde abe ngumbhali onohlonze udon Mattera, Yvonne Chaka Chaka, Thandiswa Mazwai, nabanye abaningi.
Kuleli dili lanamuhla kulindeleke inqwa- ba yabaculi asebenzisane nabo ohambweni lwakhe lwempilo.
Ezoo Lake kuzoqhutshekwa kuze kube wulwesine lulunye enyangeni ezokwethwasa unhlolanja (February), kukhonjiswa ngemifanekiso eqoshiwe ngempilo yakhe okufaka phakathi umculo negalelo lakhe ekubumbeni isizwe kwezepolitiki nakusikompilo.
Usuku lomngcwabo lwaziwa yilabo asondelene nabo kuphela kangangokuba nabemithombo yezindaba kabanikezwanga imininingwane.
Ngolwesine umndeni umemezele ukuthi umngcwabo kabra Hugh uzohanjelwa kuphela wumndeni, yizihlobo nabangani.
Abezindaba nomphakathi jikelele abavumelekile. Ushone ngemuva kokuxinwa wumdlavuza wamankwahla, waze waphoqeleka ukuhlaba ikhefu ekwamukeleni izicelo zokuyocula.
Ngokwejwayelekile uma kudlula emhlabeni iqhawe elisezingeni likabra Hugh kuyaye kungenelele nohulumeni ezinhlelweni zomngcwabo kodwa um- ndeni ukubeke kwacaca ukuthi ezimfunweni zakhe wayecacisile ukuthi kungenziwa lokhu kowakhe umngcwabo, ufuna kube ngowomndeni nabasondelene nabo kuphela.
Kungasa emnyango uma kungabalwa konke akwenzile kule mboni angene kuyo eseyibhungu njengoba eshone esekhiphe ama-albhamu angama-49. Ngale komculo uphinde waklonyeliswa yizikhungo eziningi njengoba umculo wakhe ebewusebenzisela ukulwa nokunyathelwa kwamalungelo abantu.